Kufara Panopfidza Mutadzi | Upenyu hwaJesu
MUFANANIDZO WEHWAI YAKARASIKA NEMARI YAKARASIKA
NGIROZI DZIRI KUMATENGA DZINOFARA
Paari kuita ushumiri hwake, Jesu anotaura kakawanda nezvekuzvininipisa. (Ruka 14:8-11) Ane chido chekutsvaga varume nevakadzi vanoda kushumira Mwari vachizvininipisa. Kusvika pari zvino vamwe vavo vachiri vatadzi vanotozivikanwa.
VaFarisi nevanyori vanoona kuti vanhu ava, vavanofunga kuti havakoshe, vari kutevera Jesu nekuti vari kufadzwa nemashoko ake. Vanoshora zvaari kuita vachiti: “Munhu uyu anogamuchira vatadzi uye anodya navo.” (Ruka 15:2) VaFarisi nevanyori vanoona sekuti vanokosha zvekuti vanobata vanhu vakaderera semarara avanotsika netsoka dzavo. Kuratidza kuti vanovenga vanhu ava vakaderera, vatungamiriri vechitendero vane shoko rechiHebheru ravanotovashandisira rokuti ‛am ha·’aʹrets, kureva kuti “vanhu vepasi [venyika].”
Asi Jesu anobata munhu wese neruremekedzo, mutsa netsitsi. Izvi zvinoita kuti vakawanda vevanhu ava vakaderera, kusanganisira vaya vanotozivikanwa kuti vatadzi, vave nechido chekunzwa Jesu achidzidzisa. Asi vanhu pavanomushora nekubatsira kwaari kuita vanhu vakaderera, Jesu anonzwa sei uye anoita sei?
Mhinduro yacho inobuda pachena paanotaura mumwe mufananidzo unobatsira vateereri vake kunzwisisa, wakafanana newaakambotaura muKapenaume. (Mateu 18:12-14) Mumufananidzo wacho, Jesu anotaura sekunge kuti vaFarisi vanhu vakarurama vatori mudanga remakwai aMwari uye vanhu vakaderera ndivo makwai akarasika. Jesu anoti:
“Ndoupi wenyu anoti kana aine makwai zana, kana akarasikirwa nerimwe chete rawo, asingasiyi makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe murenje, oenda kunotsvaka rarasika kusvikira ariwana? Zvino kana ariwana anoriisa pamapfudzi ake, ofara. Kana asvika kumba anoshevedza shamwari dzake nevavakidzani vake, achiti kwavari, ‘Farai neni, nokuti ndawana gwai rangu ranga rarasika.’”—Ruka 15:4-6.
Jesu anotsanangura sei mufananidzo wacho? Anoti: “Ndinokuudzai kuti kuchava nomufaro mukuru kudenga pamusoro pomutadzi mumwe chete anopfidza kupfuura kufarirwa kunoitwa vakarurama makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vasina chikonzero chokupfidza.”—Ruka 15:7.
Nyaya yekupfidza yataurwa naJesu inofanira kuita kuti vaFarisi vazviongorore. Vanoona sekuti vakarurama izvo zvinoita kuti vanzwe sekuti havafaniri kupfidza. Vamwe vavo pavakamboshora Jesu makore apfuura nekuti akanga ari kudya nevateresi nevatadzi, akavapindura achiti: “Handina kuuya kuzoshevedza vanhu vakarurama, asi vatadzi.” (Mako 2:15-17) VaFarisi, avo vanozviita vanhu vakarurama havaone paine chavanofanira kupfidza, saka havana mufaro wavanounza kudenga. Asi kana mutadzi akapfidza, kudenga kunova nemufaro.
Achida kunyatsosimbisa pfungwa yekuti kupfidza kwemutadzi kunoita kuti kudenga kuve nemufaro, Jesu anopa mumwe mufananidzo. Mumufananidzo uyu, Jesu anorondedzera zvinowanzoitika mumba achiti: “Ndoupi mukadzi ane madrakema gumi, anoti kana arasikirwa nedrakema rimwe chete, asingabatidzi rambi, otsvaira imba yake, onyatsotsvaka kusvikira ariwana? Zvino kana ariwana anoshevedza vakadzi vaanoshamwaridzana navo nevavakidzani, achiti, ‘Farai neni, nokuti ndawana drakema rangu randanga ndarasa.’”—Ruka 15:8, 9.
Jesu anotsanangura mufananidzo uyu zvakangofanana nezvaaita paatsanangura mufananidzo wemakwai akarasika. Anoti: “Nokudaro, ndinokuudzai, mufaro unovapo pakati pengirozi dzaMwari pamusoro pomutadzi mumwe chete anopfidza.”—Ruka 15:10.
Pafunge, ngirozi dzaMwari dzinofarira zvikuru kupfidza kwevatadzi! Izvi zvinoshamisa nokuti vatadzi vanopfidza vowana nzvimbo muUmambo hwaMwari hwekudenga vanenge vava nenzvimbo yakakwirira kupfuura ngirozi pachadzo. (1 VaKorinde 6:2, 3) Asi hadzivanzwire shanje. Saka isu tinofanira kunzwawo sei kana mutadzi akadzoka kuna Mwari achiratidza kuti apfidza zvechokwadi?
Chii chinoita kuti Jesu awadzane nevanhu vanotozivikanwa kuti vatadzi?
VaFarisi vanoona sei vanhu vakaderera uye mabatirwo avanoitwa naJesu?
Jesu anopa chidzidzo chei achishandisa mifananidzo miviri?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kufara Panopfidza Mutadzi